Booking.com အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（39.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Booking.com: Hotels, Apartments & Accommodation
Booking.com အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏နောက်ခရီးကိုသိမ်းပါ။ ကောင်းမွန်သောဟိုတယ်နှင့်တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ရေးများကိုရှာဖွေပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။ လေယာဉ်ပျံများ၊ အငှားကားများနှင့်အခြားအရာများကိုအက်ပ်မှတဆင့်လည်းကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
- သင်၏ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအက်ပ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ (တည်းခိုခန်းများ၊ လေယာဉ်များ၊ ကားငှားရမ်းခများ၊ အငှားယာဉ်များနှင့်အခြားအရာများ)
- အခမဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေပါ။ (ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုတွင်ရရှိနိုင်)
- ဘာသာစကားပေါင်း ၄၀ ကျော်ဖြင့် ၂၄/၇ ထိဝန်ဆောင်မှုကို
- ကြိုတင်ဘွတ်ကင်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်အခကြေးငွေမပါပါ။ - သင်၏ပစ္စည်းနှင့် app တွင်တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ - မိုဘိုင်းအတွက်သာခံစားပါ လျှော့စျေးများ - သန်းချီသောနေရာထိုင်ခင်းများ (ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်းများ၊ အိမ်များ၊ villas များ၊ ရိုင်းကီးစ်နှင့်အခြားများများ) တွင်ပြည့်စုံသောနေရာကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန်စစ်ထုတ်စက်များကိုအသုံးပြုပါ။ - - သင်၏ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုအားစာရွက်စာတမ်းဖြင့်အတည်ပြုရန် - ပုံနှိပ်ရန်မလိုပါ။ - ခရီးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများကိုစီမံခြင်း၊ သင်လိုချင်သည့်အချိန်နှင့်နေရာတိုင်းတွင်ပြောင်းလဲခြင်းများကိုပြုလုပ်ပါ။ - ဒေသဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုများကိုရှာဖွေပြီးသင်၏ခရီးစဉ်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။
ပျူငှာသောကျေးလက်နေအိမ်များ မှနေ၍ စိတ်ပျက်စရာကောင်းသောမြို့တိုက်ခန်းများအထိသန်းနှင့်ချီသောနေရာများမှပြည့်စုံသောနေရာကိုရှာပါ။ vailable တည်းခိုခန်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပလီကေးရှင်းသည်ဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ဘော်ဒါဆောင်များ၊ အားလပ်ရက်အငှားခန်းများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ အခန်းများ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်အိပ်ရာနှင့်နံနက်စာတည်းခိုခန်းများကိုဖွင့်လှစ်သည်။
ဟိုတယ်များအားစျေးနှုန်းဖြင့်စစ်ထုတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်ရမှတ်၊ WiFi အရည်အသွေးနှင့်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောအခြားအရာများ။ စျေးပေါသောဟိုတယ်များကိုမြို့၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ မှတ်တိုင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်အမည်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။ အထူးတောင်းဆိုမှုများ? အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဖော်ရွေတဲ့ဟိုတယ်များ။ ငါတို့မှာအရာအားလုံးအတွက်စစ်ထုတ်ကိရိယာတွေရှိတယ်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးကိုရရှိရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများကိုဘေးချင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
မည်သည့်ဘတ်ဂျက်အတွက်မဆိုအရောင်းအ ၀ ယ်
နေ့စဉ်နေရာထိုင်ခင်းအပေးအယူများကိုရှာဖွေပြီးနောက်လာမည့်ငွေကိုသက်သာပါ။ ဟိုတယ်၊ တိုက်ခန်း၊
အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်စာရင်းသွင်းသောအခါရွေးချယ်ထားသောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အထူးသီးသန့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှအထူးလျှော့စျေးများကို ၁၀% နှင့်အထက်ရယူပါ။ ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ နေအိမ်များ၊ အိမ်များ၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အားလပ်ရက်အငှားစာခန်းများနှင့်မိုတယ်များ၊ သင်၏စံပြနေထိုင်မှုကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေပါ။
အစီအစဉ်များပြောင်းလဲမှုလား။ ပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ Booking.com ရှိဟိုတယ်များ၊ တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအိမ်ခြံမြေများတွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကအရာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည် - ပယ်ဖျက်ရန်ကိုအသာပုတ်ရန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောနေရာတစ်ခုကိုသင်အခမဲ့ရှာဖွေနိုင်သည်။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်နေရာသို့ ဦး တည်နေသလား။ အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ဟိုတယ်များကိုနောက်ဆုံးမိနစ် (ကြိုတင်မဲ ကြိုတင်၍) တွင်လျင်မြန်စွာဘွတ်ကင်လုပ်နိုင်သည်။ တိုတောင်းသောနိုင်ရန်အတွက်နေရာတစ်ခုရှာဖွေခြင်းပိုမိုလွယ်ကူဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကသင့်အားအနီးအနားရှိအိမ်ခြံမြေများရှာဖွေရန်၊ အသေးစိတ်အနည်းငယ်ဖြည့်ပြီးသင်၏ကြိုတင်မှာကြားထားမှုကိုလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ သင်တို့သည်လည်းပြောင်းလဲခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်သွားလာရင်းအပေါ်နောက်ထပ်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုလွယ်ကူစွာစာရင်းသွင်းပါ။ ဒီ app ကတစ်နေ့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာသောလေကြောင်းခရီးစဉ်ရှာဖွေမှုတွေကိုရှာဖွေခွင့်ပေးတယ်။ အဓိကလေကြောင်းလိုင်းများနှင့်ခရီးစဉ်အားလုံးအတွက်လေယာဉ်လက်မှတ်ရနိုင်သည်။
ကားငှားရမ်းခြင်းကိုမကြာသေးမီကအက်ပလီကေးရှင်းသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သင်သွားလိုသောနေရာကိုစူးစမ်းရန်စီးရုံသာလိုအပ်သည်လား၊ သို့မဟုတ်မော်ကွန်းခရီးလမ်းကိုသွားနေသည်ဖြစ်စေ Booking.com app သည်ကူညီနိုင်သည်။ အဓိကကုမ္ပဏီကြီးများထံမှကားတစ်စီးကိုငှား။ လမ်းကိုထိပါ။
သင်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်စေ ပြတိုက်လက်မှတ်များ၊ အချက်အပြုတ်ခရီးစဉ်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်များစီးခြင်း၊ အတွေ့အကြုံများကိုအွန်လိုင်းမှမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
ခရီးသွားဖော်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပါ၊ အကောင်းဆုံးနေရာထိုင်ခင်းများ၊ ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံအကြံဥာဏ်များရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံအသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
ဘာအသစ်လဲ Booking.com: Hotels, Apartments & Accommodation 29.4
Booking.com, get the hotel reservations you actually want!
Agoda vs Booking.com I A User's Perspective I Safwat Solaiman: Travels and More
nyein chanOo nyein chan
Mg Mg Parchitz0
🎱 Ok Google...